चुनावी सभापछि अख्तरले एक अन्तर्वार्तामा कन्हैया कुमार एक उम्मेदवार र एक सांसद मात्रै नभएर त्यसभन्दा धेरै भएको बताए । राज्यसभा सांसद समेत रहिसकेका अख्तरसँग पत्रकारले गरेको प्रश्न र उनले दिएको जवाफको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पत्रकार : तपाईंले चुनावी सभामा कन्हैयालाई जिताउन आवश्यक भएको भन्दै अपील गर्नुभयो । तपाईं स्वयं पनि राज्यसभा सांसद भइसक्नुभएको छ । कन्हैयाले जिते पनि उनी एक सांसद मात्रै बन्छन् । के एउटा सांसदले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ?
जावेद अख्तर : तपाईंले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । यो सत्य हो कि एउटा सांसदले संसदमा कुनै क्रान्ति गर्न सक्दैन । तर कन्हैया जो छन्, उनी एक सांसदभन्दा धेरै छन् । प्रगतिशील विचारका उनी एक प्रतीक भइसकेका छन् । धर्मनिरपेक्षता, मजदूर, किसान र कमजोर वर्गका मानिसहरूको लागि समभाव राख्ने नेताको प्रतीकका रूपमा कन्हैया स्थापित भइसकेका छन् । यदि उनी यति महत्वपूर्ण छैनन् भने अचम्मको कुरा यो छ कि मिडियाले उनलाई यति चासोका साथ किन पछ्याइराखेका छन् ? कन्हैया महत्वपूर्ण छैनन् भने मिडियाले उसलाई नपछ्याए भइहाल्थ्यो नि । तर यस्तो होइन । किनकी मिडियालाई थाहा छ कि उनीहरू कसको शासन चाहन्छन् भन्ने जनतालाई थाहा नदिन पनि कन्हैयाजस्ता मानिसहरू आवश्यक छन् ।
पत्रकार : बडो अचम्म लाग्ने एउटा प्रसङ्ग के छ भने अन्ना हजारेको अभियान चलिरहेको बेला तपाईं त्यसको विपक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो । उक्त अभियानमा केही चिज ठीक थिएन भने कुरा के तपाईंलाई पहिल्यै आभाष थियो ?
जावेद अख्तर : तपाईंलाई अझै त्यो कुरा याद आइरहेकोमा मलाई एकदमै खुशी लाग्यो । अन्नाको अभियान चलिरहेको बेला नै मैले ट्वीट गर्दै भनेको थिएँ कि दुई वर्षपछि सबैले अन्ना हजारेको नाम समेत बिर्सिनेछन् । त्यो सही ठहरियो । र जसले त्यतिबेला मलाई गाली भरिएका प्रतिक्रिया दिएका थिए, उनीहरूसँग यति साहस थिएन कि मसँग माफी मागुन् । आज अन्ना हजारे कहाँ छन् ? त्यतिबेला मैले यहि भनेको थिएँ कि अन्नाको अभियान झुट थियो । त्यसैले अब मेरो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्, म झुट र सत्य के हो भन्ने चिन्दछु ।
पत्रकार : तपाईंले जनतालाई अपील गर्ने बेलामा कन्हैयालाई भोट नदिनु भाजपालाई भोट दिनु हो भन्नुभयो । र अर्को प्रसंगमा ‘मुसलमान भोट बाँडिन नदिनु’ भन्दै एक नेताले भनेको कुरामा विरोध जनाउनुभयो । के यी दुई कुरामा विरोधाभाष छैनन् ?
जावेद अख्तर : छैन । यसमा बिल्कुलै विरोधाभाष छैन । किनकी हिन्दू भोट यसमा, मुसलमान र शिख भोट त्यसमा भन्नु कुन लोकतन्त्र हो ? संसदमा कुन धर्मावलम्बीको भोट कति भनेर हात उठाउन भन्नु लोकतन्त्र हो ? अल्पसंख्यकहरूको भावना त्यसमा कसरी सुरक्षित हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको अल्पमत र बहुमतको खेल होइन । अलग–अलग समय र मान्यताका आधारमा यो फेरबदल भइरहन्छ । यो स्थायी होइन । यदी कोही मुसलमान वा हिन्दू भएकै कारण उसलाई भोट गरिन्छ भने त्यसरी भोट गर्नेहरू ठूला पापी हुन् । कुनै पनि धर्म वा विश्वाससँग तपाईंको के लेनादेना ? यदी तपाईं धर्मनिरपेक्षताको लागि लड्नुहुन्छ भने पहिले तपाईं आफै यी कुराहरूसँग निरपेक्ष रहनु आवश्यक छ । यसमा यो वा त्यो बहानामा बाध्यता रह्यो भन्ने कुरा हुँदैन । भोट दिने बेलामा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो उम्मेदवारले हामी सबैको भलो गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो व्यक्ति हाम्रो आवाज बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हो । जुन दिन तपाईं आफुलाई धर्म, सम्प्रदाय वा विश्वासका आधारमा बाँड्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईं सही व्यक्तिलाई चुन्न सक्नुहुन्न ।
पत्रकार : धर्मनिरपेक्षताका जति पनि स्थापित अनुहारहरू छन्, जस्तो कि लालुप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादवहरू जसरी धर्मनिरपेक्षता शब्दलाई लोकप्रिय नाराको रूपमा दोहोर्‍याइरहन्छन्, उनीहरूलाई यतिबेला मुद्दाको आधारमा कन्हैया साझा व्यक्ति हुनसक्छ भन्ने किन लागेन ? के उनीहरूले यो मौका गुमाएका हुन् ?
जावेद अख्तर : राजीतिका बाध्यता, चक्कर वा रणनीतिहरू के हुन्छन् भन्ने म त्यति जान्दिनँ । तर मलाई माफ गर्नुहोस्, देशमा अहिलेसम्म जुन किसिमको धर्मनिरपेक्षता छ भनिन्छ, त्यसबाट म सन्तुष्ट छैन । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै धर्म विशेषको आधारभुत रवैयालाई स्वीकार्नु भन्ने होइन । एक समय शाही हमाम जानुलाई धर्मनिरपेक्षता मानिन्थ्यो । म त्यसलाई धर्मनिरपेक्ष मान्दिनँ । यो त कस्तो कुरा भयो भने सद्भावको राग अलाप्दै एक सम्प्रदाय अर्को सम्प्रदायसँग हात मिलाइरहेका छन् र यहि नै धर्मनिरपेक्षता हो । धर्मनिरपेक्ष मानिस त ती सम्प्रदायहरूसँग जोडिन पनि मन पराउँदैन ।
पत्रकार : अन्तिम एउटा प्रश्न गरौं । यो पतनको सुरुवात त तपाईंको क्षेत्रमा समेत भइसकेको छ । पतन त्यहाँ पनि छ । जसरी फिल्महरू बनिरहेका छन्, त्यसमा साहित्यबोध छैन, इतिहासबोध छैन । गाउँ, समाजजस्ता चिजहरू त्यहाँ गायब छन् । राजनीतिमा पनि त्यस्तै किसिमको पतन छ । तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमा भएको पतन त रोक्न सक्नुभएन भने राजनीतिमा भएको पतन कसरी रोक्न सक्नुहोला भनेर कसैले प्रश्न सोधे भने तपाईं के जवाफ दिनुहुन्छ ?
जावेद अख्तर : समाजमा कसको नियन्त्रण छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा नै होला ? यहाँ कसको निर्देशनमा सबै हुन्छ ? जो सत्तामा हुन्छ, समाजमा उसैको असर, प्रभाव र नियन्त्रण हुन्छ । र तपाईं जुन पतनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त मैले कन्हैयाको सभामै भनिसकेको छु । जब विष फैलिन्छ तब त्यसले शरीरको हरेक अंगलाई असर गर्छ । यस्तो त हुँदैन कि त्यो विषले एउटा अंगलाई मात्रै असर गर्छ र अर्कोलाई गर्दैन । त्यतिबेला त्यो विष हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ । त्यो विष तपाईं विश्वविद्यालयमा देख्नुहुन्छ । फिल्म, अफिस, बजार, सडक सबै ठाउँमा त्यो फैलिन्छ । तर यसो भन्दैमा हामी त्यो विष विरुद्धको हतियार बिसाउन सक्दैनौ । हामी लड्नुपर्छ । हामी हरेक मोर्चामा लड्नुपर्छ । विभिन्न तरिकाले लड्नुपर्छ । विषको असर यता लैजाने कि उता लैजाने भन्ने निर्णय सत्ताले गर्छ । त्यसकारण हामी राजनीतिक रूपमा पनि लड्नुपर्छ ।